ट्रम्प कार्डले मात्र मेक्सिको पर्खाल लाग्न सक्तैन | सिमान्तMarginal ट्रम्प कार्डले मात्र मेक्सिको पर्खाल लाग्न सक्तैन – सिमान्तMarginal
Posted on 13 Nov 2016 13 Nov 2016 by Jesi | INCOMESCO
कुनैपनि राष्ट्रप्रमुखले मुलुकको सम्बिधान र जनताप्रति उत्तरदायी रहेर सपथ खानुपर्छ, त्यसैले त्यो उपस्थिति सिर्फ़ त्यहि मुलुकको लागि हो । यस मानेमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी हितका लागि प्रस्तुत भएका हुन, अरु कसैका लागि होइनन । मुलत: ट्रम्प काँचो माटो हुन् ; उनि वार्गेनिङ्गमा सफल भए जस्तो देखियो, जसले अरब र मध्यपूर्वको काँचो युद्ध पकाएर एसियामा पस्किने “रियालिज्म” का सूत्रहरु प्रयोग गरिदिन सक्छन । ट्रम्प महोदय “ब्रेक्जिट” को पनि कट्टर समर्थक हुन, “ब्रेक्जिट” रोक्न कसरतहरु भैरहेका वेला उनको विजयले कस्तो मोड लेला, हेर्न बाँकी छ ! जेहोस, अमेरिकी ४५ औं राष्ट्रपतिका विजयी रियल स्टेट टाइकुन डोनाल्ड ट्रम्पलाइ भने वधाई दिनै पर्छ ।
स्याण्डी हुक एलिमेण्ट्रि स्कूलमा एडम लान्जाले २६ जना मारे पछि कति त्यस्ता घटना घटे र कति पटक अमेरिकी ‘गन ल’ बन्द गर्छु भनेर ओबामा रोए ! तर उनले सकेनन,
सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त के देखियो भने “ट्रम्पलाइ जिताउन पुटिन सफल भए” भनेर संस्थापन पक्षका अधिकांश पश्चिमा संचार र विज्ञहरुको रुवावासि उता तत्कालै पुटिनको स्वागतले अमेरिकी चुनाव परिणाममा झकास थपियो, र लाग्यो- शक्ति भित्रबाट कति हिनभावहरु आउन थाले ! यो परिणाम धेरैको अनुमान भन्दा पर थियो, जसरि ब्रेक्जिटमा वेलायतीहरुले अनुमानभन्दा बाहिर संस्थापन पक्षलाइ धक्का दिएका थिए । के अब असीको दशक पछि जगमगाएको पश्चिमी नव-उदारवादको ज्योति, (जसलाई १% धनिहरुको व्यवस्था भनेर प्रदर्शन भए) लाई “९९% जनता” ले निभाउदै जान थालेकै होलान ?! त्यसो हो भने डोनल्ड ट्रम्प आफै अमेरिकाको १% का प्रतिनिधि पात्र हुन ?! फ्रान्सकी प्रतिपक्षी नेता मारिया लापें र वेलायतका लेबोर पार्टिका नेता जेरेमी करविनका भनाइहरुले पनि विकल्प तर्फ़ नै संकेत गरेको बुझिन्छ । जे होस पिल्सिएका मानिसहरुले निकास खोजेको संकेत भने अवश्य हो ।
डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको कौडा फालेका थिए, छक्कै पर्यो । तर उनले भने झैं न त मेक्सिको पर्खाल लाग्न सक्छ न त आप्रवासीहरु नै लखेटिन सक्छन । सिम्पल- स्याण्डी हुक एलिमेण्ट्रि स्कूलमा एडम लान्जाले २६ जना मारे पछि कति त्यस्ता घटना घटे र कति पटक अमेरिकी ‘गन ल’ बन्द गर्छु भनेर ओबामा रोए ! तर उनले सकेनन, उनको ओबामा केयर प्लान अलपत्र छाडेर जाँदैछन, बिजोग छ । सुरक्षा निकायको ‘ सुरक्षा इन्ट्रेष्ट’ लाई उपेक्षा गर्न त्यहाँका प्रशासकहरुलाई गारो छ । डोनाल्ड ट्रम्प एक्लै केहि होइनन ।
Previous Postगणतन्त्रको गलगाँढNext Postअध्ययन !